९ वर्षपछि नेविसंघको महाधिवेशनः नेतृत्वका लागि दौडमा को–को ? « Pahilo News
९ वर्षपछि नेविसंघको महाधिवेशनः नेतृत्वका लागि दौडमा को–को ?
प्रकाशित मिति : 29 June, 2016 7:22 am
१२ असार । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले ९ वर्षपछि आगामी साउन २३ गतेदेखि काठमाडौँमा ११ औँ महाधिवेशन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि संगठनभित्र चुनावी सरगर्मी बढेको छ । समयमै महाधिवेशन हुन नसक्दा नेतृत्व अवरुद्ध भएको नेविसंघमा नेतृत्व लिनका लागि विद्यार्थी नेताहरु दौडमा लागेका छन् ।
कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएलगत्तै घोषणा भएको यसपटको नेविसंघको अधिवेशनलाई त्यही कारण पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । सातौँ पटकको स्थगनपछि महाधिवेशन हुने भएकाले पनि विद्यार्थीबीच बढी चासो देखिएको छ ।
०६४ सालमा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित प्रदीप पौडेल लोकप्रिय मतसहित अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । त्यसपछि अहिलेसम्म महाधिवेशन नहुँदा धेरै नेता–कार्यकर्ता बाहिरिसकेका छन् । ‘हामीले यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवशेनका रुपमा लिएका छौँ,’ नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि अचाचार्यले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले नै छ महिनाभित्र सबै भ्रातृ संगठनलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यो पटक महाधिवशेन रोकिन्न ।’
बस्नेतले ‘बार्गेनिङ’का लागि नभई नेविसंघ बनाउन अध्यक्षको दाबी गरेको बताए । ‘मेरो अध्यक्षको दाबी कांग्रेसभित्रको गुण्डागर्दी अन्त्यका लागि पनि हो,’ बस्नेतले भने, ‘म निर्वाचित भएपछि संगठनलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान्छु र गुटको अन्त्य गर्छु ।’
अर्का पूर्वमहामन्त्री जीतजंग बस्नेतले पनि यसपटक महाधिवशेन नरोकिने दाबी गरे । महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया अघि बढाएको र नेतृत्व पनि निर्वाचनकै पक्षमा देखिएकाले महाधिवेशन नरोकिने उनको भनाइ छ । उनले लामो समय निर्वाचन नभएकाले नेतृत्वका लागि आकांक्षी बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अहिलेसम्म जीतजंग बस्नेत, मनोजमणि आचार्य, नैनसिंह महर, दीपक भट्टराई, नीलकण्ठ रिजाल, कुन्दन काफ्ले र रत्न कार्कीले अध्यक्षको दाबी गरेका छन् ।
तीबाहेक अहिले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका अञ्जन लामा, विनिता अधिकारी, आनन्द त्रिपाठी, शुभराम बस्नेत, क्षितिज भण्डारी, राजीव ढुंगाना र सरोज थापाले पनि आफूलाई अध्यक्षको प्रत्यासी बताइरहेका छन् । यद्यपि, अहिलेको केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरुले सभापतिको दाबी गर्न नपाउने विधि–विधान तय गर्ने तयारीमा कांग्रेस रहेकाले धेरैले अध्यक्षको दाबी गर्ने बाटो बन्द हुने बताइएको छ ।
नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले अध्यक्षका आकांक्षी धेरै भए पनि अन्तिमसम्ममा पार्टी र संगठन बसेर सबैको हितमा हुने गरी तय गर्ने दाबी गरे । तर, दुई गुटमा विभाजित कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा सर्वसम्मत बनाउने सम्भावना देखिँदैन ।
अधिकारी एक्लो महिला उम्मेदवार
कांग्रेसले महिलालाई अघि बढाउने हो भने विनिता अधिकारी एक मात्र दावेदारका रुपमा देखिएकी छिन् । नेविसंघको प्रभाव मानिने पद्मकन्या क्याम्पसकी पूर्व स्ववियु सभापति अधिकारी नेविसंघमा प्रभावशाली महिलाका रुपमा परिचित छिन् । उनलाई कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले संकेत दिएपछि अध्यक्षको तयारीका लागि एक साता अघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् ।
को कुन गुटका ?
नेविसंघमा देउवा समूहका दुई र पौडेल समूहका तीन जनाले सभापति पदको दाबी रहेको छ भने कुन्दन काफ्लेले कृष्णप्रसाद सिटौलाका नाममा आफूलाई अघि सारेका छन् । डडेल्धुराका नैनसिंह महर र ललितपुरका जीतजंग बस्नेत देउवा समूहका हुन् । यसअघि महर उपाध्यक्ष र बस्नेत महामन्त्री भइइसकेका छन् ।
देउवाको गृह जिल्लाका महरभन्दा बस्नेतलाई देउवा पक्षबाट टिकट ल्याउन सहज रहेको बताइन्छ । पहिलादेखि नै आरजु देउवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले टिकट ल्याउन उनलाई सजिलो हुने बताइन्छ । आरजुको माइती र जीतजंगको घर एकै ठाउँमा छ ।
‘२५ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म (वुटवल, विराटनगर, चितवन र प्रजातान्त्रिकको नेपालगञ्ज) चारवटा मात्र महाधिवेशन सम्पन्न भए,’ जीतजंग बस्नेतले भने, ‘नियमित अधिवेशन भएको भए अहिलेसम्म १२ जना अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा हुने थियो । अहिले नवौँ पटक महाधिवेशन मिति घोषणा भएको छ । अब यो महाधिवशेनको उद्घाटन र बन्दशत्र मात्र होइन, चिर्वाचनबाटै नेतृत्व छनोट हुनुपर्छ ।’
अहिले नेविसंघको केन्द्रीय समिति १ सय २१ सदस्यीय छ । नयाँ समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वले भने अहिले भएको कमिटी पनि जम्बो भएको भन्दै काँटछाँटको प्रस्ताव गरेको छ ।
महाधिवशन यता पौडेल समूहबाट रोल्पाका मनोजमणि आचार्य र तनहुँका दीपक भट्टराई मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । महामन्त्री रहिसकेका आचार्य पौडेल समूहका बलियो उम्मेदवार मानिन्छन् । ‘मैले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय र क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेको छु,’ आचार्यले भने, ‘म सभापति बन्ने अवस्थामा सबैलाई लिएर लैजान सक्छु ।’
भट्टराई चाहिँ त्रि–चन्द्र कलेजका सभापति बनिसकेका हुन् । ‘पुरानालाई नै नेतृत्व दिने हो भने आचार्यको विकल्प छैन,’ नेविसंघका एक नेताले भने, ‘नयाँतिर जाने हो भने भट्टराई र रिजालको पालो आउँछ ।’
कत्रो बन्दैछ केन्द्रीय समिति ?
पूवअध्यक्षहरुको समर्थन कसलाई ?
हालसम्मका अध्यक्ष कोको ?